आजको राशिफल श्रावण ४ गते सोमबारGandaki Press
आजको राशिफल श्रावण ४ गते सोमबार
साउन ४, २०७८ ०७:१४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण ४ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई १९ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको दशमी तिथि वेलुका ७ः१८ बजेसम्म, त्यसपछि एकादशी रहनेछ ।
मेष – काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी भइनेछ । तर मध्यान्ह पछि गर्दै गरेका कार्यमा समेत विघ्न बाधा आउने छ । खर्च भार बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा समेत समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
वृष – दिन आर्थिक दृष्टिले विशेष लाभकारी रहने छ । नयाँ संझौता हुनेछ । दैनिक काम कार्यमा समेत नयाँ स्रोत साधनको प्रयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ । व्यवसाय फस्टाउनेछ । हर्षको खबरले मन खुसी बन्नेछ ।
मिथुन – विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । सामान्य मिहिनेतले नै सिप सिक्न र बुझ्न सकिनेछ । बन्धुवान्धवसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । बौद्धिक कलाको प्रशंसा पाइनेछ ।
कर्कट – पूर्वार्धकाे समयमा समस्याहरु यथावत् नै रहने छन् । नयाँ लगानि नगर्नुहोला । मध्यान्ह पछि स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ । आर्थिक पक्षमा समेत सुधार भएर जाने देखिन्छ ।
सिंह – मित्र मिलन हुनेछ । सहमति र सहकार्यमा कार्यहरु गरिने छन् । तर मध्यान्ह पछि भने एक्कासी स्वास्थ्य समस्या, दैनिक कार्यमा समेत विघ्न बाधा उत्पन्न हुनेछ । व्यवसायबाट न्यून प्रतिफल मिल्नेछ ।
कन्या – ऐतिहासिक कार्यको थालनि गरिनेछ । तपाईँको काम गर्ने कलाले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ तथा समर्थन मिल्नेछ । मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनाले मन फुरुड्ड बन्नेछ । हर्ष बढ्नेछ ।
तुला – मनमा शन्तिको अनुभूति हुनेछ । काम अनुसारको नाम, दाम मिल्नाले सन्तोष मिल्नेछ । व्यवहारिक पक्ष सवल रहनेछ । मध्यान्ह पछि अल्छि गर्नाले महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ, अल्लि जागरुक रहनु होला ।
बृश्चिक – पूर्वार्धमा समस्या तथा चुनौतिको सामना गर्नु परेता पनि मध्यान्ह पछिको समय क्रमिक रुपमा सुधार भएर जानेछ । आत्मबल आत्मविश्वास बढ्नेछ । धेरै व्यक्तिको साथ तथा समर्थनले कार्य बन्ने छन् ।
धनु – नयाँ लगानि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्वाद्र्धको समय विशेष शुभकारक रहनेछ । तर मध्यान्ह पछि भने व्यर्थको चिन्ता, पीरले सताउनेछ । वैचारिक मतभेदका कारण ठूला व्यक्तिसँग नै विवाद बढ्ने छ ।
मकर – छोटो समयमा धेरै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । कामको उचित रुपमा मूल्यांकन पाइनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष उन्नतिको संकेत देखिन्छ । आम्दानिका नयाँ नयाँ श्रोतहरु फेला पर्ने छन् ।
कुम्भ – आँफू भन्दा ठूला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लाग्नेछ । नयाँ जिम्मेवारी पाइनेछ । व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ मिल्नेछ । कार्य क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य ठिकठाक नै रहला ।
मीन – पूर्वान्हको समयमा समस्याले छाड्ने छैन । दुःख गरेता पनि न्यून उपलब्धि मिल्नेछ । तर मध्यान्ह पछिको समय सुधारोन्मुख रहनेछ । सकारात्मक सोच विचार रहनेछ । आर्थिक पक्षमा सुधार हुनेछ ।